Vaovao - Iza amin'ireo sary vongana an-tanàna 20 no mamorona kokoa?
Ny tanàna rehetra dia samy manana ny kanto ampahibemaso, ary ny sary sokitra an-tanàn-dehibe amin'ny tranobe feno olona, ​​ao anaty bozaka sy valan-javaboary, manome buffer sy mandanjalanja ny vahoaka. Fantatrao ve izany ireo Sarin-tanàna 20 mety ho ilaina raha manangona azy ianao amin'ny ho avy.
The sary sokitra ny " Herin'ny natiora ”Ao amin'ny tanàna lehibe erak'izao tontolo izao dia noforonina avy amin'ny mpanakanto italiana Lorenzo Quinn. Nahazo aingam-panahy i Quinn tamin'ny fanapotehana ny tontolon'ny tany taorian'ny rivo-doza, ary nanao alimo, vy vy ary alimo sary sokitra ao amin'ny " Herin'ny natiora " andian-dahatsoratra . Ity no "Herin'ny natiora" any Londres.
Mpanakanto frantsay Bruno Catalano no namorona an'i Les Voyageurs (Les Voyageurs) tany Marseilles, France. Manafina ny ampahany manan-danja amin'ny vatan'olombelona ilay sary vongana, ary tsapa fa nandalo tionelina kely fotsiny izy ireo, ary ny ampahan-javatra tsy hita dia nampifoha ny olona Tadidio fa ny mpandeha rehetra dia tsy azo ihodivirana fa mamela efitrano be fisainana rehefa miala ao an-tranony izy. Ary ny ampahany tsy hita amin'ilay sary sokitra ve dia maneho ny fon'ny olona maoderina?
Ny sarivongan'i Kafka noforonin'ny mpanao sokitra Czech Jaroslav Róna dia niorina tamin'ny sehatra iray tao amin'ilay tantara voalohany “America” an'i Kafka “America” (1927). Nandritra ny fihetsiketsehana iray, mpifaninana politika no mitaingina eo an-tsoroky ny goavambe. Tamin'ny 2003 dia vita tao amin'ny Dusny Street any Prague io sary sokitra io.
Ny ankamaroan'ny sanganasan'i Louise Bourgeois (1911-2010) dia nitondra ny fialonana, hatezerana, tahotra ary ny fahazazany maharary azy imasom-bahoaka tamin'ny alàlan'ny asa. "Maman" (Spider) manoloana ny tranombakoka Guggenheim any Bilbao, Espana. Spider 30 metatra ny halavany dia tandindon'ny reniny. Mino izy fa ny reniny dia hendry, manam-paharetana ary madio toy ny hala.
Ny Cloud Gate izay noforonin'ny mpanakanto britanika Anish Kapoor dia sary sokitra boribory 110 taonina, fantatra koa amin'ny anarana hoe pod, any amin'ny Millennium Park any Chicago. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny merkurialy ranoka, 66 metatra ny halavany ary 33 metatra ny haavony. Sarivongana an-tanàn-dehibe malaza any Chicago izy io.
Tamin'ny taona 2005, teo amin'ny morony atsinanan'ny Danube any Budapest, ny talen'ny sarimihetsika Can Togay ary mpanao sary sokitra Gyula Pauer dia namorona ny "Shoes by the Danube" ho fahatsiarovana ny famonoana jiosy Hongroà an-jatony nanomboka tamin'ny 1944 ka hatramin'ny 1945. Talohan'ny famonoana dia nametraka ny kirarony teo amoron'ny renirano ny Jiosy, saingy taorian'ny fitifirana, dia napetraka mivantana tao amin'ny Danube ny faty.
Fantatra tsara ny sarin'i Nelson Mandela. Ny sary sokitra akaikin'i Howick any Afrika atsimo dia noforonin'ilay mpanakanto afrikanina tatsimo Marco Cianfanelli.
Ilay sary sokitra akanjo namboarin'ilay mpanao sary sokitra soedoà Klas Oldenburg dia eo akaikin'ny Lapan'ny tanànan'i Philadelphia.
"Digital Dougca" (Digital Dougca) dia tsara tarehy na hafahafa, any Vancouver daholo no mijery ny seranan-tsambo sy ny tendrombohitra Cypress Park. Ity sary sokitra ity dia misy vy mirandrana, mitafy aliminioma ary cubes mainty sy fotsy, ka toerana tsara ho an'ireo mpizahatany sy eo an-toerana maka sary.
Ny voninkazo balloon (mena) dia miorina ao amin'ny World Trade Center vaovao any New York City.
Ny sary vongana varahina misy soavaly dia any Las Vegas, noforonin'i Robert Glenn, dia mampiseho ny fisehoan'ny soavaly sivy sivy mihazakazaka ao anaty rano.
Ilay sary sokitra manoloana ny Tranombokim-pirenena any Melbourne, Aostralia, dia midika hoe fianjeran'ny sivilizasiôna ary miaraka amin'izay koa dia midika fa fohy ny zava-misy.
"The Knotted Gun" dia eo akaikin'ny foiben'ny United Nations any New York. Ity sary sokitra ity dia maneho fanantenana ho an'ny tontolo tsy misy herisetra.
Ity fametrahana vy ity dia ao Prague no iray amin'ireo asan'i David Sini. Ny maha samy hafa an'io sary sokitra io dia ny hoe afaka mihodina ireo sosona vy tsy misy fangarony 360 degre amin'ny alàlan'ny Internet, ary rehefa ampifanarahana tsindraindray dia loha be no azo foronina. Ny sanganasa dia ny fampidiran'ny mpanakanto ny fanaraha-maso mekanika sy ny haitao amin'ny solosaina amin'ny kanto.
Karazana fisainana manao ahoana no asehon'ity sary sokitra manana halavany roa-polo metatra any Philadelphia ity? Esory ny vato misakana rehetra, tsy maintsy…
Eo ivelan'ny Museum Pompidou Museum of Modern Art no misy ilay sary sokitra. Noforonin'ny mpanakanto frantsay Cesar Baldaccini, izy io dia maneho ny iray amin'ireo lohahevitra tiany indrindra, ny fanehoana an-tsary ny olombelona, ​​ny biby ary ny bibikely.
Nosoratan'ilay mpanakanto hongroà Ervin Loránth Hervé, nesorina ilay bozaka lehibe ary toa niakatra avy tamin'ny tany ireo sary sokitra goavambe. Miorina ivelan'ny tsenan'i Budapest Art ny sary vongana.
Alberta's Dream dia sary sokitra nataon'ny artista espaniola Jaume Plensa. Politika be ny asa, ary toa maro ny olona manana ny heviny momba ny tena dikany. Na izany aza, io no mampiavaka ny kanton'i Plensa, satria manentana ny fifandraisana tsy nisy teo aloha io.
Ny asan'ny mpanao sary sokitra Singapore Chong Fah Cheong (anarana sinoa: Zhang Huachang). Ny sary sokitra dia mampiseho ny fotoana nisy zazalahy maromaro nitsambikina tao amin'ny Ony Singapore. Ity vondrona sary sokitra ity dia miorina ao amin'ny Bridge Cavenagh, tsy lavitra ny Hotel Fullerton.
"Sotro sy sakamalao" ao amin'ny Minneapolis Sculpture Garden dia endrika tsara sy milalao ao amin'ny zaridaina, ary hita taratra koa amin'ny tendrony roa amin'ireo tahom-boaloboka mainty. Ny mpanao sary sokitra dia nanome azy ny famafazana rano mba hitazomana ny serizy ho vokany tsara foana.